Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Azia Atsinanana tamin’ny Mey 2014
Shina10 Mey 2014
Tsy sambany fanagadrana an'i Pu Zhiqiang izao. Amin'ny maha-mpitsikera mivantambantana azy amin'ny politikan'ny governemanta Shinoa, arahin'ny mpitandro ny filaminana maso akaiky izy.
GV Face: Fihetsiketsehana Tanamasoandro Ao Taiwan
Taiwan (ROC)10 Mey 2014
Amin'ny GV Face androany, hiresaka amin'i I-Fan Lin, mpanoratra ao amin'ny Global Voices Taiwan sy i Portnoy Zheng, mpiara-mpanitsy lahatsoratra ao amin'ny Global Voices amin'ny teny Shinoa isika mikasika ny fihevitry ny ao an-toerana ny fihetsiketsehana ao Taiwan.
Thailandy09 Mey 2014
SARIPIKA: Navadik'ireo Mpanao Fihetsiketsehana Tao Taiwan Ho Zava-kanto Ny Fefy Vy Napetraky Ny Polisy
Taiwan (ROC)06 Mey 2014
Nametraka sakan-dalana vy manodidina ny tranom-panjakana ny polisy mba hanakanana ireo mpanao fihetsiketehana manohitra ny nokleary tsy hitangorongorona. Ho setrin'izany, namorona ilay nomen'ny sasany anarana hoe fampirantiana zava-kanto eny amin'ny arabe ireo Taiwaney.
GV Face: “Aziatika” Loatra Teo Ampivoahana? Ny Kolontsaina Sy Ny Faharendrehan'ny Ferry No Voatsiny
Korea Atsimo05 Mey 2014
Manjaka tanteraka ny fitsarana an-tendrony raiki-tapisaka momba an'i Korea Atsimo ao amin'ny ankamaroan'ireo vaovao mikasika ilay sambo ferry nilentika ka nitarika fahafatesan'olona maherin'ny 200.
Shina02 Mey 2014
Mampisongadina ny fanamby miandry amin'ny fiarovana sy ny fifanenjanana ara-poko miotrika ao amin'ny faritany manakarena ara-akora ny fanafihana.